United Airlines ekwuputala ụgbọ elu ọhụrụ na-akwụsịghị akwụsị site na US gaa Jọdan
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Jordan » United Airlines ekwuputala ụgbọ elu ọhụrụ na-akwụsịghị akwụsị site na US gaa Jọdan
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa na Jordan • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị njem nlegharị anya Jọdan (JTB) nwere obi ụtọ ịkpọsa ụgbọ elu ọhụrụ, nke na -eme ka ọ dịrị ndị njem America mfe ịfefe na Jọdan. United Airlines ga -enye ụgbọ elu ụgbọ elu si Washington DC gaa Amman malite na Mee 5, 2022, ọ ga -efekwa ugboro atọ n'izu. Nke a bụ ụgbọ elu nke mbụ ga -ejikọ isi obodo abụọ ahụ.
Nnyocha e mere n'oge na -adịbeghị anya nke ndị nlekọta njem nlegharị anya Jordan rụchara gosiri na 2022 dị njikere imebi ndekọ njem na DC.
Pasent 65 nke ndị na -ahụ maka azụmaahịa na United States nwere akwụkwọ njem njem na ọdịda nke 2021 na Jọdan, ma e jiri ya tụnyere naanị pasent 15 n'oge gara aga.
Site na usoro COVID doro anya dị na mba ahụ niile, ndị njem kwesịrị inwe ahụ iru ala ịga leta Jọdan.
Patrick Quayle, onye isi osote onye isi ala mba ụwa kwuru, "Obi dị anyị ụtọ ibupute isi obodo ọhụrụ ahụ n'isi obodo, Washington DC na Amman, ọrụ, na -eme ka ọ dị mfe ijikọ ọtụtụ mmadụ na Jọdan na ihe nketa na ọdịbendị bara ụba nke obodo ahụ ga -enye." Netwọk na Njikọ aka.
Nkwupụta sitere na United na -egosi ntụkwasị obi ụgbọ elu ahụ na ebe ọ na -aga ka njem mba ofesi na -amalite ịmalite mgbe mbibi ọrịa ahụ gasịrị. Ntugharị a na -akwadokwa nyocha emere na nso nso a nke Kọmitii njem nlegharị anya nke Jordan rụchara nke gosiri na 2022 dị njikere imebi ndekọ njem na ebe ọ na -aga. Nnyocha ahụ gosikwara na pasent 65 nke ndị na -ahụ maka azụmaahịa na United States nwere akwụkwọ njem na ọdịda nke 2021, ma e jiri ya tụnyere naanị pasent 15 n'oge gara aga.
"Obi dị anyị ụtọ ịnabata onye na -ebu ụgbọ na Jọdan iji nyere aka mepee azụmahịa n'etiti isi obodo Washington DC na Amman. Anyị na -anabata ndị njem America na alaeze mgbe niile ka ha hụ ọdịbendị dị ịtụnanya na ụdị dị iche iche Jordan nwere inye. ” Ekekọrịta Abed Al Razzaq Arabiyat, Onye isi nchịkwa nke Board Tourism Board nke Jordan.
Malia Asfour, Director nke Board Tourism Board na North America kwuru, "Anyị na -atụ anya ịnabata United Airlines na Amman, ma na -arụkọ ọrụ ọnụ iwetakwu ndị njem ka ha hụ obodo anyị dị ịtụnanya." “Site na usoro COVID doro anya dị na mba ahụ niile, ndị njem kwesịrị inwe ahụ iru ala ịga leta Jọdan. Nke a bụ nnukwu nzọụkwụ n'ịjikọ isi obodo Jọdan na Washington DC, na ịgba ndị njem America ume ka ha depụta ahụmịhe njem bara uru na ebe nkiri ụwa ama ama dịka Petra, Wadi Rum na Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ. ”
Iji mụtakwuo maka ụzọ ọhụrụ, gaa united.com/en-us/new-routes.
Iji mụtakwuo gbasara ihe bara uru gaa Jọdan gaa na weebụsaịtị nletajordan.com.